मोदीले प्रचण्डलाई तीन घण्टा किन कुराए ?::mirmireonline.com
मोदीले प्रचण्डलाई तीन घण्टा किन कुराए ?
कार्तिक १ काठमाण्डौं ।
नेपालको राजनीतिमा कुनै न कुनै रुपमा दवाव दिदै आएको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली समकक्षी पुष्पकमल दाहाललाई झण्डै सवा तीन घण्टा कुराएर मात्र भेट्नु भएको छ ।
भेट राति सवा ११ बजे भएको थियो । भेटमा दुवै देशले विगतमा गरेको सहमति कार्यन्वयन गर्नेबारे छलफल गर्नु भएको थियो ।
भ्रमण टोलीका एक सदस्यले मोदी जी व्यवस्त भएकाले भेटमा ढिलाई भएको बताए ।तर मोदी विदेशी मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने समयमा के मा व्यस्त थिए भन्ने एकीन भएको छैन । स्मरणीय छ त्यो समय अघि नै मोदीले चीनीया राष्ट्रपति, रुसी राष्ट्रपति सग भेटवार्ता गरीसक्नु भएको थियो ।
नेपालमा एक ईतिहासका जानकार चेतेन्द्र जंग हिमाली नेपाललाई भारतले हेपिरहेको र त्यसमा निरीह बन्ने नेपाली नेताहरुको प्रचलनका कारण यो केटालाई जतिखेर भेटे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले त्यस्तो भएको हुन सक्ने टिप्पणी गर्नु भएको छ ।
मिर्मिरेसग‘ कु्रा गर्दै उनले पटक पटक गरी ३७ वर्ष नेपाली राजनीतिक पार्टीहरुले नेपालमा शासन गरी सक्दा पनि भारतबाट लाभ भन्दा पनि हानी व्यहोर्नु परेको भन्दै दलहरुको यो प्रवृतिले नेपालको सार्वभौम भविष्य गंभीर खतरामा पर्दै जाने औल्याउनु भयो ।
भारतले एयर मार्सलदेखि विभिन्न कु्रामा नेपालको रणनीतिक महत्वको क्षेत्रमा पकड बनाउन खोजेको भन्दै जनता सतर्क र जागरुक नभए समस्या आउने हिमालीले बताउनु भयो ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले असोज पहिलो साता भारत भ्रमणको क्रममा गरेको २५ बुदे सहमति लागु गर्ने, सविधान ससोधन गरी मधेशी मोर्चाको माग पुरा गर्ने आस्वासन मोदीलाई दिनु भएको छ ।
यस अघि शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनीया राष्ट्रपति सि जिन पिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसग‘ सयुक्त रुपमा भेट्नु भएको थियो ।